Izindaba - Imboni yelanga ekhanyisa imigwaqo yelanga "iqhuma ukuduma" futhi, imfihlo ngemuva kwebhethri
Ishaja Ac / DC
Ukukhanya kwensimu yelanga
Ukukhanya komgwaqo welanga
Isibani sodonga lwelanga
Imboni elanga yomgwaqo “iqhuma ukuduma” futhi, imfihlo ngemuva kwebhethri
Eminyakeni yamuva, amandla elanga athuthuke ngokushesha futhi asabalalela emikhakheni ehlukahlukene, ikakhulu ngenxa yokwehla kwezindleko ze- amaseli elangakanye nokugcina amandla. Njengengxenye ebalulekile yemikhiqizo yamandla elanga, ukwehliswa kwezindleko kwamaseli elanga kukhuthaza ukuthuthukiswa okusheshayo kwemboni yamandla elanga. Uma kubhekwa ukuthambekela kokuthuthuka komkhakha welanga lomgwaqo wezwe lakithi, ezinye izikhungo zibikezela ukuthi umkhiqizo wemboni yonke kulindeleke ukuthi ube cishe kwizigidi ezingama-20.25 ngo-2020. Ngo-2020, amandla emakethe amalambu emigwaqo elanga azofinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-60.
Izibani zomgwaqo welangakufanele ibe nentuthuko engcono; kodwa ngenkinga yempilo yebhethri yezimoto ezintsha zamandla, amabhethri amaningi asusiwe. Endabeni yezinqubomgomo nemithetho kazwelonke engajwayelekile nokusetshenziswa okungavuthiwe kobuchwepheshe bokusetshenziswa kwe-echelon, abakhiqizi abaningi ukuze bakwazi ukubhekana nalawa Mabhethri kusetshenzwe ngawo ngentengo ephansi, noma kuze kuthengiswe ngethani, ngakho-ke intengo idlulela ngokweqile ephansi, futhi ezinye izindleko zingahle zisuke ku-1 / 5-1 / 10 wamabhethri ajwayelekile. Angahlala isikhathi esingakanani la mabhethri? Abathengisi abanakho okuphansi. Ngakho-ke, le mikhiqizo uqobo lwayo ayiqinisekisiwe, futhi ngenxa yokuthi eminingi yayo ingukuthengiselana ngemali, asikho isiqinisekiso ngemuva kokuthi ukuthengiselana sekuqediwe.
Izinto eziyinhloko zamakhemikhali zebhethri zakhiwe ngama-electrode amahle kanye ne-electrodete ehlukanisayo ye-electrode, njll.; futhi lezi zinto ngokwazo zinomjikelezo wokuphila. Thatha i-lithium iron phosphate njengesibonelo, impilo yomjikelezo ingafinyelela izikhathi ezingama-2000, ngakho-ke njengoba inani lemijikelezo landa, izinto zamakhemikhali ezikulo Izinguquko ziyenzeka, okwenza umjikelezo wokuphila wonke ungaqiniseki. Thatha itekisi elimsulwa likagesi eShenzhen njengesibonelo. Umhleli uxoxa nomphathi. Itekisi labo elisebenza ngogesi likhokhiswa kabili ngosuku, kanti lokhu kuyashaja futhi kuyadedelwa manje. Umjikelezo uphindeka kabili ngosuku, futhi inani lemijikelezo yiminyaka emi-3. 2 * 365 * 3 = izikhathi ezingama-2190. Inani lemijikelezo ye- lithium iron phosphate batteryyizikhathi ezingama-2000, futhi inani lemijikelezo alikwazi ukufinyelelwa ngemuva kochungechunge oluthe xaxa nokuxhuma okufanayo ezimotweni zikagesi. Uma ibhethri elikhishwa emotweni kagesi ngemuva kweminyaka emithathu yokusebenza linempilo yomjikelezo engaphezu kwezikhathi ezingama-2 000, futhi ngokubuka kwezici zalo zamakhemikhali, impilo engasebenziseka ayinakuqinisekiswa. Kungakho kungekho mkhiqizi webhethri onesibindi sokwenza lokhu. Isizathu sokuthi kungani ibhethri liya kuwaranti.
Amalambu emigwaqo yelanga avame ukusetshenziswa njengemishini yengqalasizinda kazwelonke, enezimpawu zobunjiniyela, ekhonza uquqaba, futhi ehlobene nempilo yangempela yabantu, ngakho ukuthembeka, ukuphepha nokuzinza kwemikhiqizo kudinga kakhulu. Futhi amabhethri aphelelwe yisikhathi asetshenziswa amalambu emigwaqo elanga ezisiza umphakathi, futhi kunengozi enkulu yezokuphepha. Ibhethri engasasebenzi uqobo inezingozi ezinkulu ezifihliwe, ngoba ibhethri engasasebenzi uqobo lwayo seludlulise umjikelezo wokushaja nokukhipha omude, futhi izici zalo zokuphila nezamakhemikhali azisaqinisekisiwe. Kufana nomuntu ohlinzwe inhliziyo ngokudlula futhi kufanele amyeke agijime isikhathi eside ngokufana nomjaho webanga elide. Kungenzeka angabi nankinga, kepha ingozi iphezulu ngokweqile. Kodwa-ke, njengomkhiqizo wamaphrojekthi wengqalasizinda, amalambu emigwaqo elanga awamukeleki. Lokhu kuhlobene nezimpilo nokuphepha komphakathi.
Okwethu ukukhanya komgwaqo welanga asetshenziswa Ibhethri lesigaba se-lithium, angahlala izinsuku ezingama-3-5 ezinemvula nge-lumen resutlt enhle
Isikhathi Iposi: Jul-22-2021
Ikheli: Isitezi sokuqala, isifunda senzhen sokuqala semali engenayo eChina.
Ithenda yesitoreji se-proj esikhulu kunazo zonke ...
I-Eni Group ithole iSpain ...
Uhlelo olusha lwamandla ayisisekelo eJapan ...
Imboni yelanga ekhanyisa imigwaqo yelanga “ex ...
URugao wenza kabusha imigwaqo kamasipala e-4 enez ...